အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေမှာ အများဆုံးရှိတတ်တဲ့ လိင်မှုကြောက် စိတ်ရောဂါ
လိင်မှုကိစ္စစွမ်းဆောင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါ ရှက်တာ ၊ စိတ်ဖိစီးတာတွေ ဖြစ်ပြီး ခံစားမှု ပြင်းထန်ခြင်းအပေါ်မူတည်ပြီး လိင်ကိစ္စကို ကြောက်ရွံ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓမ္မကျင့်ဖို့ ကြံစည်ခံရတာ ၊ အကျင့်ခံရတာ စတဲ့ လိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိခဲ့သူတွေအပြင် ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကို မကြုံတွေ့ပေမယ့်လည်း လိင်မှုကိစ္စကိုကြောက်ရွံ့ပြီး အပျိုကြီး ၊ လူပျိုကြီး ဖြစ်သွားသူတွေ ရှိကြပါတယ်။ လိင်မှုကိစ္စကို ကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာ အနည်းငယ်ထူးဆန်းသလို ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်း တစ်ကယ်ပဲ ဒါကို အပြင်းအထန်ကြောက်ရွံ တုန်လှုပ်တဲ့ စိတ်အခြေအနေ ရှိသူတွေ ရှိပါတယ်။
1.Genophobia (လိင်ဆက်ဆံရမှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း)
2.erotophobia (လိင်မှုကိစ္စအားလုံးကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း)
ဒီစိတ်ရောဂါ နှစ်မျိုးလုံးက သာမန်လိင်မှုကိစ္စကို မကြိုက်ရုံမဟုတ်ဘဲ လိင်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကို တွေးမိရုံနဲ့တင် ထိတ်လန့် ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အတင်းအကြပ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် အကြောက်လွန်ပြီး အသက်ရှူကြပ်လာတာ ၊ မေ့လဲသွားတာမျိုးအထိ ထိခိုက်နိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေမှာ ရှိတတ်ပြီး အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ လိင်မှုကြောက်စိတ်ရောဂါကတော့ လိင်ဆက်ဆံရမှာကို ကြောက်တဲ့ Genophobia စိတ်ရောဂါ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိတ်ရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့လည်း သူတို့မှာ ကြောက်တဲ့ တခြားအမျိုးကွဲ စိတ်ရောဂါလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံရမှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း (Genophobia ) နဲ့ ဆက်စပ် စိတ်ရောဂါများ
1. ရောဂါ သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးမည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း (nosophobia)
2. အဖော်အချွတ်ကိုကြောက်ခြင်း (gymnophobia)
3. ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း (heterophobia)
5.သူများနဲ့ထိတွေ့ရမှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း (haphephobia)
6.ကိုယ်ဝန်ရရှိမှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်း (tocophobia) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Genophobia ရဲ့ လက္ခဏာများ
Phobia ဆိုတဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတစ်ခု ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒီခံစားမှုဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ကြောက်ရွံ့မှု ၊ စိုးရိမ်သောကကို ဖြစ်စေပါတယ်။ Genophobiaမှာတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုရှိတဲ့အခါ ပျို့ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ နှလုံးတုန်ခြင်း နဲ့ ချွေးတွေထွက်လာတွေ ခံစားလာရပြီး အဲဒီအခြေအနေတွေကို အထိတ်တလန့် ရှောင်လွှဲဖို့ ကြိုးစားရပါတယ်။
Genophobia ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းများ
ကြောက်ရွံ့မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဘာလဲဆိုတာကို အမြဲတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အောက်ပါ အချက်တွေထဲကတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို သိရင် ကုသဖို့ ပိုပြီး ရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်။ Genophobia ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
လိင်အင်္ဂါက ထိုးသွင်းဖို့ ကြိုးစားစဉ်မှာ လိင်ဆက်ဆံဖို့ နာကျင်တာ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာမျိုးပါ။ အဲဒီနာကျင်မှုက လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ကြောက်ရွံ့စိတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လိင်တံမထောင်မတ်နိုင်ခြင်းဟာ ကုသလို့ ရပါတယ်။ လိင်မှုကိစ္စစွမ်းဆောင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါ ရှက်တာ ၊ စိတ်ဖိစီးတာတွေ ဖြစ်ပြီး ခံစားမှု ပြင်းထန်ခြင်းအပေါ်မူတည်ပြီး လိင်ကိစ္စကို ကြောက်ရွံ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရဖူးတာ ၊ ပြုကျင့်ဖို့ ကြိုးစားခံခဲ့ရတာ ၊ ကလေးသူငယ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံခဲ့ရတာ ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု ခံခဲ့ရသူတွေဟာ စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်စေနိုင်ပြီး လူတွေနဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေ ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်တွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ထိခိုက်နိုင်သလို လိင်ကြောက်ရွံ့မှုစိတ်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
တစ်ချို့လူတွေက သူတို့တွေဟာ ကျန်းမာရေးကောင်ပေမယ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ယုံကြည်မှုမရှိ စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ သူဟာ လှောင်ပြောင်ခံရမလား ၊ ဒါမှမဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပါ့မလားဆိုတာကို တွေးပြီး စိတ်မသက်မသာဖြစ်တာကြောင့် လိင်ဆက်ဆံဖို့ ကြောက်ရွံ့ပြီး ရှောင်ကြဉ်တာ ဖြစ်စေပါတယ်။
လူတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝတယ် ၊ ပိန်တယ် ၊ ပုတယ် ၊ ရှည်တယ် စသည်ဖြင့် ဝေဖန်တာ ပြစ်တင်တာတွေကို ခံရတဲ့အခါ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် သတိအရှိလွန်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလို Body Shaming အလုပ်ခံရတဲ့သူတွေဟာ ပျော်ရွှင်မှုမရှိခြင်းနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ကြောင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ကြပါတယ်။
ဒီလို လိင်ကြောက်ရွံ့စိတ်ရှိတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပြီး မရှက်ဘဲ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးကုသမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့် ကြောက်ရွံ့မှုကိုလည်း ကုသနိုင်သလို စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့် ကြောက်ရွံ့တာမျိုးဆိုရင်လည်း တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွေးနွေးရင်း ကုသနိုင်ပါတယ်။